Mamaha ny ankamantatry ny voambolana shinoa an-jotra: Ny nahatonga ny Jady hanondroana ny filoha shinoa Xi Jinping · Global Voices teny Malagasy
Voafono ao anatin'ny tarehintsoratra shinoa voatonona ny anaran'ny filoha shinoa
Voadika ny 23 Jona 2022 5:13 GMT
Endri-tsoratra shinoa navadika ho sary tao amin'ny “fonttopng.com“. Sary avy amin'i Oiwan Lam.
Nampiasain'ireo Shinoa mpanohitra ivelan'ny firenena ny voambolana shinoa hoe “Jady” (Vatosoa maitso) na “Fei Cui” (翡翠) ho fanehoana ankamantatra hitsikerana ny Filoha Shinoa Xi Jinping tato anatin'ny taona vitsivitsy. Azo inoana fa hitohy ny fironana satria vao avy nanao “fanentanana Jade” an-jotra ireo mpanohitra ara-politika Shinoa, mitaky ny hanonganana ny mpitondra faratampony.
Araka ny Rakibolam-panadihadiana litera shinoa, tamin'ny voalohany ny Fei Cui anondroana karazam-borona antsoina hoe Vorona Mivolo-Maitso (青羽鳥), Fei no lahy ary Cui no vavy. Taty aoriana, ny “Fei Cui” la nisolotena ny jady maitso, ilay vato sarobidy maneho ny maha-andriana, ny harena ary ny vitana tsara amin'ny kolontsaina nentim-paharazana Shinoa.
Eo amin'ny firafitry ny famoronana, ahitana ampahany roa ny tarehintsoratra sinoa “Fei” (翡) , ny hasinteny izay milaza ny dikany sy ny singa fanononana milaza ny enti-manonona ilay tarehintsoratra. Eo amin'ny lafiny fanononana, eo ambony indrindra ny Fei (非). Na izany aza ilay tarehintsoratra Fei (非) dia mety hidika ihany koa hoe “diso”, “miiba”, na “mitsipaka” ao aminy. Ny ampahany ambany no singam-panononana, Yu (羽), izay midika hoe “volomborona”.
Manana izany firaftra ihany ihany koa ny litera “Cui” (翠). Ny dikan'ny tarehintsoratra dia asehon'ny “Yu” (volomborona), izay atao eo ambony indrindra raha ny singam-panononana “Zu” 卒 no eo amin'ny faritra/tapany ambany. Entin'ny “Zu” ny dikan’ny hoe “miaramila an-tongotra” na “fahafatesana” rehefa mijoro samirery.
Ary satria samy mitondra dika miiba ny hasintenin'ireo tarehintsratra ireo ary ny hasinteny Yu (羽 volom-borona) iraisan-dry zareo dia rafetin'ny tarehintsoratra roa notsorina “Xi” (习), izay tsy inona fa ny anaram-bosotry ny Filoha Shinoa Xi Jinping, dia nahombiazana ireo Shinoa mpanohitra ivelan'ny faribava (any ampitan-dranomasina) nanome dika vaovao ny voambolana “Fei Cui” (jady) hidika hoe “manohitra an'i Xi” sy “Maty i Xi”.
Noraketin'ny China Digital Times fa tamin'ny taona 2020, nampiasa ny farangoteny “Qi Cui” (祈翠) ny mpiserasera Shinoa sasany, izay nidika ara-bakiteny hoe “Mivavaha ho an'i Jady”, hanozonana ny mpitarika faratampony. Nanomboka teo, nitatitra ireo Shinoa mpisintaka ivelan'ny faribava fa voasivana tao amin'ny media sosialy sy lalao anjotra Shinoa ny teny hoe “Cui”, na dia tsy voamarina aza izany filazana izany.
Nihanalaza ny dika ara-politikan'ny Jady (Fei Cui) rehefa nanandrana nanao fanentanana hanoherana ny tolo-kevitr'i Xi Jinping hifaninana amin'ny fe-potoam-piasana fahatelo ho Filoham-pirenena amin'ny Vovonan'ny Antoko Komonista Shinoa ho avy any Beidaihe ny Shinoa mpisintaka ivelan'ny faribava .
Iray amin'izany ezaka maro izany ny “fanentanana Jady” niainga vao haingana indray. Felahan'ny fanentanana anjotra i Xi Jinping noho ny nitarihany an'i Shina ho amin'ny fihemorana ara-politika, ara-toekarena ary amin'ny zon'olombelona ary ampirisihany ny mpiserasera Shinoa hiteny hanohitra an'i Xi amin'ny fampiasana farangoteny ahitana ny #downXi sy #JadeCampaign.